Microsoft Windows Server haisi yakanaka sisitimu yekushandisa yemaseva ... | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Kugoverwa, Linux vs. Windows
Iwe unogona kufunga kana iwe uchiverenga iyo musoro.Huye, pane nhau! Izvi ndaitozviziva! Uye ndizvo Microsoft Windows Server Iyo haigone kukwikwidza kana kuve nechero chekuita pamaseva zvine chekuita neLinux kana imwe UNIX yakaita seSolaris, FreeBSD, AIX, nezvimwe. PA desktop Microsoft Windows ndiyo isingazivikanwe mambo, iine quota iyo yaakawana, asi maererano ne HPC chimwe chinhu chakasiyana kwazvo. Pamwe mamwe mabhizimusi madiki kana epakati nepakati anosarudza Windows Server nekuda kwechimwe chikonzero kana nyore kushandisa, asi bhizimusi hombe kurisarudzira rinenge risina musoro (kunyange paine).
Kuchengeteka, kugadzikana, kusimba Idzi ndidzo dzimwe dzenyaya dzinoita kuti utize kubva paWindows Server mapuratifomu, uye pamwe mumwe munhu achandiudza kuti vakachengeteka, vakagadzikana uye vakasimba ... Zvakanyanya sekuparadzirwa kweLinux kana chero OS yandakataura pamusoro? Ini handifunge, pamusoro pemutengo werezinesi, kuti ichave imwe nyaya kusarudza imwe sisitimu pane iyo inopihwa neMMS. Isu tese takaona makambani makuru aya akatambudzwa zvakanyanya kubva malware, kana nyaya dzichangoburwa dzeransomwere dzakaparadza mamwe makambani chaizvo pakushandisa Windows Server. Izvo hazvireve kuti hakuna Linux malware, asi iwo kesi angadai akadzivirirwa. Nei Microsoft pachayo kana Apple pachayo ichishandisa Linux pamaseva avo? Kana vakavimba neServer zvigadzirwa zvakanyanya… vanofanirwa kuzvishandisa… handiti? Iwe unenge uine mukana wekuita kudaro.
Zvakanaka, kune avo vachiri nekusahadzika, inozivikanwa portal Phoronix, yakaburitsa mhedzisiro yemamwe mabenchmarks akaitwa pairi Microsoft Windows Server vs 6 Linux kugoverwa. Mhedzisiro yeakawanda emayedzo ekuita haasiye chigadzirwa chakabhadharwa chaizvo zvichienzaniswa nemamwe akavhurika uye emahara ... Iwo ma6 distros anga ari Ubuntu (maviri maBhaibheri), Debian, openSUSE, Antergos, uye Bvisa Linux. Uye kuti vamwe vakaita saSLES kana RHEL havana kuongorora, izvo nenzira, ini ndinotora mukana wekuti isu munguva pfupi tichaita ongororo yakadzika mune ino blog nezve chimwe chezvinhu izvi zvauchazoda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft Windows Server haisi yakanaka inoshanda sisitimu ...
Zvinotaridza kuti unoshanda nemaseva ... Uye zvinonyanya kukosha ... Tora kugoverwa kwemahara kwechirongwa wobva wanyunyutira tenzi wepfuti kana chimwe chinhu chaitika mukambani yako ... Linux inoda kuve nechishandiso hafu seine simba se Active Directory. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mamwe maseva anogona kuva akasimba muLinux (maseva enharaunda dzeWEB. Iwe haugone kuwana chero chinhu chiri nani pamusika kupfuura iyo Dhairekitori Rinoshanda, DNS kana Shanduro yakapusa ... Kana ndichida chengetedzo ndinoisa chaiyo firewall uye kwete shit ine IPTables, kubva pakadzika kuremekedza.
Edward Del Puerto akadaro
LOL, mukomana ari nyore kana iwe uchida kushandisa Active dhairekitori mune linux unogona kushandisa Samba seDC, kana 389 Dhairekitori dura kana ... Zvakanaka unofanirwa kusarudza ha ha ha, DNS? windows LOL…. Exchange LOL…. ngatiregei kunyange yeDNS server…. as for mail server they are used by zvine mwero makambani akakomba… Nenzira, wakambopfuura nepakati pekuchengetedzwa kwekomputa chengetedzo, waona here kuti zvinotora nguva yakareba sei MS kugadzirisa matambudziko ayo ekuchengetedza?…. Zvisinei, kana iwe usingade iptables, usazvidya moyo, firewalld ndiyo yave standard. Kwaziwai!
Windows Server haitomboshandira kupa masevhisi akanangana neMicrosoft, ndinorangarira kutsamwa kwakawanikwa nevadzidzisi nekuti pavanowana dura rakagovaniswa neiyo "inoshanda" sisitimu inopfuura makumi maviri neshanu vatengi vese vakarasa kubatana.
GNU / Linux ine samba yakaiswa pakombuta iyoyo kuti iite basa rimwe chete uye dambudziko rakapera.
Mune imwe macro kirasi mbiri, angangoita mazana maviri aive akabatana uye iyo penguin haina kana kutadza.
Saka kudzivirira kuti Windows ichave inoshanda sevha ndeyekuregeredza zvachose nyaya yacho.
Ndingakurudzira Zentyal inova "benzi chiratidzo" (kunyangwe maWindows Admins).
Ini ndinoshanda mukambani ine vanodarika zana vashandi uye nhamba hombe yemasheya ane zvirongwa zvekuchengetedza zvakasiyana.
Kutanga, kana iwe usina network yakanaka, unorasikirwa nehukama. Chechipiri, kana iwe usina yakanaka windows server setup, haishande zvakanaka.
Chechitatu, kana iwe usingakwanise kuita maviri ekutanga, usapinda mune iri bhizinesi.
Vadzidzisi? Zvei, zvemabhuku?
"Unogona kutaura kuti unoshanda nemaseva ..."
R / Pane chero munhu anoshandisa MS Windows Server yeGaming? Handifunge…
"Linux inoda kuve nehafu yekushandisa zvine simba se Active Directory ..."
A / Izvo zvinoratidza kuti HAUSATI WAKAMBOSHANDA neSamba.
"Hapana chaunowana chiri nani kupfuura ... DNS"
A / Kune zviuru zvezvisarudzo zvakaenzana kana zvirinani pane Micro $ kazhinji. DNS yakapusa ...
"Kana ndichida kuchengetedzwa, ndaisa firewall chaiyo pairi ..."
R / UNOFUNGA SEI KUTI WINDOWSER SERVER FIREWALL SERIOUS!? lol
(iwe uri 5 nyeredzi comedian)
Kana ini ndichida yakakomba FireWall ini ndinoisa pfSense, hapana kana imwe kubva kuGNU / Linux uye zvakanyanya kushoma kubva kuWindows.
Kana iwe uchida kutsoropodza iwe hapana chauri kubatsira, iwe unonyora chinyorwa chinopisa uye bapiro… zvakanaka… ndanga ndichishanda munzvimbo dzemadhata nemaseva kweanopfuura makore makumi maviri, ndichigadzirisa Windows kunyanya uye Linux. Imwe neimwe yakanaka zvinoenderana nezvamunoda kupa, muAD Microsoft, kuchinjana maakaundi mahombe, chengetedzo haigoneke mairi, zvisinei kuti unonzwa zvakadii pamusoro pemachongwe ekuchengetedza, linux pachinzvimbo mafaira, FTP, webhu, ... Mune ini ndazoona Linux neWindows zvichidzika ... ivo vese vane zvavanokanganisa
Pane kukanganisa chikamu 2 mutsara wechisere
Iwe une pripia.
Kune rimwe divi iwe wakanyatsotaura
Pindura kuna ellik159
Kupisa? Kwete, inodzidzisa zvakakwana, Windows haina kunaka kumaseva kunyangwe paM $ inotevera, ingori chidhori chinodhura chisingashande.
Kana mazana mashanu emakwikwi makuru epasi rose aine GNU / Linux uye kwete Windows imwe, ndeyechimwe chinhu.
Zvese zvakanaka, ini ndiri mudiwa weLinux, asi ini handina kusvika kuti ndione kuti ndedzipi fananidzo mune imwe kana imwe sisitimu yakaita zvirinani!
Chinhu choga chandinoverenga ndeyekunyanyisa kwako kune imwe system uye kuvenga imwe.
Nyaya haisi imwe chete!
LOL, wakaverenga here chinyorwa chizere Pane chikamu chakatarwa chinoreva kune yakakurumbira portal inoitirwa kuongorora…. Kunyange zvakadaro, kutaura kwako kunongoratidzira kunyanyisa kwako! Kwaziso
Orlando paskhal akadaro
Unogona kuona ruvengo nekushayikwa kweruzivo uye neruzivo nezvenyaya yaanoedza kutsanangura uye inomutendera kuzadza nekushusha kwakanyanya.
Shamwari ikozvino ndinokubvunza iwe mubvunzo? Wakamboshandisa maseva eMicrosoft kana masevhisi?
Ini ndinofunga handidi kwete chete canonical asi chero imwe kambani kuve nezvinobuditswa neMicrosoft maseva chete.
Kusiya kunyanyisa padivi, ndinofunga kuti maoko anovapa chikafu haafanire kuverengerwa, nekuti Microsoft ndiyo inopa zvakanyanya kusunungura software, kunyangwe kuunza masevhisi nemaapplication ayo asingatombozvigadzira nekuda kwekushomeka kwevashandisi.
Pindura Orlando Paskhal
Mhedziso yako inonakidza, chinyorwa chinotsigirwa zvakakwana nezvakanaka uye mhedzisiro yebhenji rekuyedza. Saka kwete, hazvisi zvekushingairira nekuti nhasi mubhizinesi chikamu MS haichisina simba uye huremu hwaive nahwo mumakumi emakore apfuura kubvira pakavhurwa Sosi Yakavhurwa, uye kukupa zano MS haifanirwe kune imwe kunze kwekutanga kuchinja. marezinesi avo kuti vasarambe vachirasikirwa nemusika sezvo vasina kana kumbokwezva kana kupedzisa kugonesa mazwi avo ekushandisa nemamiriro (mune zvimwe zviitiko zvakatowedzera kushungurudza huwandu hwenguva dzawaifanira kupfuura mubhokisi kuti ushandise zviri pamutemo zvigadzirwa zvavo, kana rega rusununguko rusingaperi) ... Kana iwe wakanyatso kushandisa zvimwe zvezvigadzirwa zvavo zviri pamutemo, ndinofunga hapana chimwe chekugumira, nekuti izvo zvinowedzerwa kukuipa kwavo mukuendesa chigadzirwa chakagadzirwa zvakanaka uye Hazvina basa kutaura, kuzvichengeta (pane imwe nguva kana kana iri nguva yekutanga pamusoro), ipapo ndine hurombo asi hazvina musoro kushandisa zvigadzirwa zvako mune 24 × 7 yekugadzira nharaunda inoda kuwanikwa uye kusagadzikana.
Chinhu chakanaka pamusoro penharaunda yeGNU / Linux ndechekuti chero mupiro unogamuchirwa zvakanaka zvisinei nekuti unobva kunaani (Izvo hazviite kuti MS ive nani, nekuti semakambani ese vanogara vachitsvaga zvavanofarira [Chenjera, handisi kuti kuti izvi zvakaipa], uye kana izvi zvichireva kutora zvigadzirwa zvako kana masevhisi kumakwikwi [nekuti ane mugove mukuru wemusika] vachazviita, sezvo musika wehunyanzvi wakadai - Unofanirwa kuchinjika nekushanduka nguva dzose !!! ).
"Kusiya kunyanyisa padivi, ndinofunga kuti havafanirwe kuruma maoko anovapa chikafu sezvo Microsoft iriyo inopa zvakanyanya kusoftware yemahara"
Usave benzi. Linux yave iripo kwemakore makumi maviri nemashanu panguva iyo M $ isina kupa chero chinhu, kunze kwekusava nehanya pakutanga uye nekuvhurwa kwekurwiswa gare gare. Kana isina kuvashandira, inouya nekutsvoda kubva kuna Judhasi ... uyezve, hapana kana dzimwe nguva dzevapfuuri vanomedza nyaya uye vanonyora vakagutsikana: "M $ ndiwo maoko anovadyisa." Ndapota. Iwe wakati "kuisa fanaticism padivi" uye ndiko kushoma kwawakaita.
Ivo vekare vakatozvitaura, ini ndinongowedzera: izvo iwe zvauno "chengetedza" pakupa marezinesi, iwe unobhadhara kutsigirwa, kubvunza uye kuendesa. Chimwe chinhu chakakosha iwe chausingafunge ndechekuti iro rakakura rekushandura riri mumakambani madiki madiki uye epakati asina vashandi kana zviwanikwa zvekupa masevhisi eLinux asi kuburikidza nemasevhisi evanopa nguva zhinji iyo Windows server inopa izvo server yeLinux. haigone: kushanda pamwe nekureruka. Mutengi haana hanya nezana zana zvehunyanzvi zvatingaite mukufarira Linux. Iye anongo chengeta nezve kubhadhara chimwe chinhu kuti chishande uye kwete kubhadhara mari inodhura kota mukutsigira rezinesi nguva yega yega iyo Linux server inofanira kushandirwa.
Chekupedzisira, kana Apple neMicrosoft vakashandisa Linux, iwe unofanirwa kuverenga meseji iri pakati pemitsara: shanda nezvinokushandira kana uine zviwanikwa zvehunyanzvi seApple neMicrosoft shandisa chero chinhu chinokushandira (Linux) .Saka, une chimwe chinhu chekupa. service ne kana zvisiri nyore, shandisa Windows.
Chekupedzisira, mumunda wekuchengetedzwa kwemakomputa, kusachengeteka harisi iro basa reWindows asi ndiko kudzidziswa uye kushayikwa kwekudzidziswa kweanoshandisa Windows kunogona kunge kwakasimba mukuchengetedzwa kwemakomputa nekuita seLinux kana uchipokana nazvo, ndinoreva mavhidhiyo ePablo Martínez (kupa zita rimwe chete) paYouTube.
Kana iwe uri musayendisiti wemakomputa anozviremekedza iye, zvakapusa uye zvakapusa usaroore chero munhu: kwete neWindows, kwete neMacOS, kwete neLinux
Pindura kuna Carl-OS
M $ Windows Server haisi yakanaka yekushandisa system. POINT.
Iyo inongoshandiswa chete neavo vanofanirwa kukwirisa sevha uye havazive kukwirisa sevha kana kuve nemumwe munhu wekumisikidza.
Enrique Lirio Eli akadaro
Ose ari maviri akanaka, asi sekutaura kwavo kunze uko, makambani madiki anoda kugadzirisa nemutengo wakaderera, ichokwadi kuti MS inobhadharisa mari kune chero ipi inobvisa huswa uhu mune marezinesi, asi kwete pese pese pane munhu anoshanda neLINUX uye kwete ini yakakubhadharisa chinenge chakaenzana nekutenga marezinesi ese eWindows ekugadzirisa dambudziko kana kushandisa Linux mumakambani. Tinofanira kuyeuka kuti chikamu chemusika chevashandisi vaimbojaira kushandisa uye kushandisa Windows chakakura. Neichi chikonzero, mumakambani madiki, ini ndinoisa Windows Server, uye ndinogona kukuudza kuti mune YANGU HUPENYU handina kumbove nematambudziko mazhinji nazvo. Kune rimwe divi, iyo nguva dzandinoisa Linux, iyo inodaidzira kunaya nekuti vashandisi havanzwisise zvinhu. Uye zvese nekuti ?? Mushandisi wekupedzisira anoshandiswa zvakare kushandisa Windows zvisinei nekuti ndeipi vhezheni yacho.
Pakupedzisira, WINDOWS NDIYO INOSIYA NDIMWE DIVIDENDS, NEKUTI MUTENGESI, KANA UCHITSANANGURA ZVIMWE ZVINOTENGESWA ZVEMAOKO, VANORAMBA PASI PEMAFUNGANO KUTI HAVANZWISISE IYO SYSTEM, ASI KUTAURA ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA. 98% ZVINOANGANISWA NEMAWHURE
Pindura Enrique Lirio Eli
Chinyorwa chako hachipi chinhu. Iwe unongo simbisa kuti Linux irinani uye Windows haina kubatika. Izvo zvinoita kuti ndifunge kuti hauna nharo zhinji.
Linux Vakapindwa muropa, ndapota tarisa mhando yezvinyorwa zvako.
Izvo zvinoita kuti ndifunge kuti hauna nharo zhinji.
Ndokumbirawo, iwe uratidze fananidzo dzausina kunyatso tarisa, pane zvakataurwa nevanhu vanoshanda nemaseva anobvumirana nemunyori uye zvausina kunyatso kuverenga ... asi iwe unonyora zvakakosha: "izvo zvinoita kuti ndifunge ... ". Ndokumbirawo, zvive pachena kuti iwe hauna kuzviita futi.